कोरोनाको महामारीमा पनि किन लकडाउन गर्न चाहँदैन जापान ? – Nepaliko Aawaj
कोरोनाको महामारीमा पनि किन लकडाउन गर्न चाहँदैन जापान ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र १९, २०७६ | २१:४३:४१
चीनको बुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै तहसनहस बनाइरहेको छ। कुनै पनि देश यो भाइरसबाट बच्न सकेका छैनन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४४ हजार नाघेको छ । छ लाख ५७ हजारले यसको संक्रमणका कारण उपचार गराइरहेका छन्।
विश्वका शक्तिशाली अनि विकसित देशहरुले पनि यस भाइरसको संक्रमणलाई काबुमा राख्न सकेका छैनन् । ती देशहरुमा अझै संक्रमण अनि मृत्युको दर बढिरहेको छ। यतिबेला नेपाललगायत धेरै देशहरुले यस भाइरसको संक्रमणबाट जुध्न लकडाउन गरिरहेका छन्।
जापानमा पनि यसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदासमेत लकडाउन भने गरेको छैन । जापानको जनसंख्या १३ करोडको हाराहारीमा रहेको छ । अध्ययन, रोजगारी, व्यवसायलगायतका कामका लागि एक लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु र विश्वभरका लाखौँ मानिसहरु जापानमा रहेका छन्।
सन् २०२० मा जापानको टोक्योमा हुने ओलम्पिक खेलसमेत पछिल्लो समयसम्म गराउन सक्षम रहेको दाबी गरिरहँदा अन्य देशहरुले यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्ना खेलाडीहरु पठाउन नसक्ने बताएपछि तोकिएको मिति स्थगित गरिएको थियो। जसबाट जापानले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्न परेको छ।
जापानमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या करिब ३ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । दिनमै सयौँको संख्यामा नयाँ संक्रमितहरुको संख्या थपिइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ५७ जनाले भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। ज्यान गुमाउनेमा जापानका चर्चित हास्य कलाकार शिमुरा केनसमेत छन्। हालसम्म कुनै नेपालीहरु पनि जापानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा नपरेका भए पनि सबै सचेत हुनु जरुरी छ।
जापानमा जापनिजहरु कामलाई अत्याधिक महत्त्व दिने गर्छन्। र, पनि देशभरका स्थानीय सरकारहरुले इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भने इमर्जेन्सी अहिलेको आवश्यकता नभएको प्रष्ट पारेका छन् । आबेले आपत्काल वा नाका बन्द गर्न हतार नभएको प्रस्ट पार्दै ‘नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षा गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो’ भनेका छन् । जापानमा यसअघि नै सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमहरु स्थगन गरिएका छन् ।
नागरिकलाई भीडभाड हुने ठाउँहरुमा सकेसम्म नजान र सुरक्षित हुन भनिएका छन्। अधिकांश जापनिजहरु नियमको पूर्ण पालना गर्ने हुँदा ट्रेन, बस स्टेशनहरु, रेष्टुरेन्टहरुमा भीडभाडमा कमी देखिएका छन्।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि लकडाउनबाट देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने गर्छ। देशनै बन्द भएपछि सबैलाई दैनिक गुजारा चलाउन भत्ता तथा सुविधाहरु अवश्य दिनै पर्छ। त्यसैले जापानमा कोरोना भाइरसले विकराल रुप लिई नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन नगरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। जे होस् ‘ज्यान रहे न धन’ भनेझैँ यस कोरोना भाइरसबाट बच्न आफैँ सचेत हुनु जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ, जापान शाखाका संस्थापक सदस्य एवं वर्तमान सल्लाहकार हुन् ।)
स्वदेश फर्किने नागरिकलाई छिट्टै व्यवस्थापन गरियोस्